သင်္ချာတွက်​မရလို့ ​ခေါင်းကိုစားပွဲနဲ့ဆွဲ​ဆောင့်​တဲ့ ဆရာမကြောင့် လည်ပင်းရိုးနှစ်ချောင်းအဆက်ယွင်းသွားတဲ့ကျောင်းသား – Tameelay
သင်္ချာတွက်​မရလို့ ​ခေါင်းကိုစားပွဲနဲ့ဆွဲ​ဆောင့်​တဲ့ ဆရာမကြောင့် လည်ပင်းရိုးနှစ်ချောင်းအဆက်ယွင်းသွားတဲ့ကျောင်းသား
ကျမသားက၂တန်းပါ ဒီ​နေ့​ကြောင်းကပြန်​သားကဇက်​ရိုးခိုင်​ပီး ဟိုဘက်​ဒီဘက်​လှည့်​မရဘူး ​မေး​တော့ သင်္ချာတွက်​မရလို့. ​ခေါင်းကိုစားပွဲနဲ့ဆွဲ​ဆောင့်​တယ်တဲ့။
လက်နဲ့စာရေးလို့မရဘူးတဲ့စာမေးပွဲဖြေဖို့သုံးရက်ပဲ့လိုပဲ့လိုပီ ကျမဘယ်လိုတုန့်ပြန်သင့်လဲသူများထမင်းအိုးလည်းမခွဲချင်ဘူး ဘာလို့အကြင်နာတရားကင်းရတာလဲ အဲလိုတောင်လုပ်စရာလား ။
ကျမသားကအဖျင်းအညုံ့ကြီးမဟုတ်ပါဘူး အခုဆိုလည်ပင်းစည်းကြီးနဲ့အကြာကြီးနေရတော့မယ် မိဘချင်းကိ်ုချင်းစာပေးကြပါ။
ကမြသားက၂တနျးပါ ဒီ​နေ့​ကွောငျးကပွနျ​သားကဇကျ​ရိုးခိုငျ​ပီး ဟိုဘကျ​ဒီဘကျ​လှညျ့​မရဘူး ​မေး​တော့ သခငြ်ျာတှကျ​မရလို့. ​ခေါငျးကိုစားပှဲနဲ့ဆှဲ​ဆောငျ့​တယျတဲ့။
လကျနဲ့စာရေးလို့မရဘူးတဲ့စာမေးပှဲဖွဖေို့သုံးရကျပဲ့လိုပဲ့လိုပီ ကမြဘယျလိုတုနျ့ပွနျသငျ့လဲသူမြားထမငျးအိုးလညျးမခှဲခငျြဘူး ဘာလို့အကွငျနာတရားကငျးရတာလဲ အဲလိုတောငျလုပျစရာလား ။
ကမြသားကအဖငျြးအညုံ့ကွီးမဟုတျပါဘူး အခုဆိုလညျပငျးစညျးကွီးနဲ့အကွာကွီးနရေတော့မယျ မိဘခငျြးကျိုခငျြးစာပေးကွပါ။
နှစ်လုံးထီ၊ သုံးလုံးထီများကို လိုင်စင်ထုတ်၍ အခွန်ကောက်ခံပါက ဆင်းရဲသားများအတွက် ထွက်ပေါက်ဖြစ်နိုင်
နှစ်လုံးထီ၊ သုံးလုံးထီများကို လိုင်စင်ထုတ်၍ အခွန်ကောက်ခံပါက ဆင်းရဲသားများအတွက် ထွက်ပေါက်ဖြစ်နိုင် ——- မင်းသီဟန် ——- နှစ်လုံးထီ ၊ သုံးလုံးထီများကို လိုင်စင်ထုတ်ပေး၍ တရားဝင်ရောင်းချခွင့်ပြုပြီး အစိုးရက အခွန်ကောက်ခံပါက ဆင်းရဲသားများအတွက် ထွက်ပေါက်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားဝန်ကြီး ဦးဇော်အေးမောင်က ပြောသည်။ ရခိုင်ဓမ္မာရုံတွင် အောက်တိုဘာ ၁၃ …